Miyaad iiga sheegi kartaa bogagga sare iyo liiska goobaha la jecel yahay?
Aan la kulanno - inaad boggaaga boggaaga ama blog-ga aad si fiican u ogaatid oo aad marar badan uga hadashid ilaha caanka ah ee kale ee leh PageRank waa hab weyn oo lagu kasbado kuwa ku haboon ee loogu talogalay SEO. Habkaa, ma aha inaad kaliya ku dafiri kartid dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah laakiin koraan awooda xooggan iyo magaca calaamadda ganacsigaaga - oo dhan. Waa hagaag, waxaan hoosta ka caawinayaa inaad ka sii ogaatid wax badan oo ku saabsan dhabarka dambe iyo liiska goobaha lagu soo bandhigay dhismaha organic.
Tirada VS. Tayada
Marka ay timaaddo in lagu wado SEO habka saxda ah, istaraatiijiyada dhismaha xiriiriyaha dabiiciga ah kaliya ayaa ku sameyn doona website-kaaga. Haddii aanad rabin inaad waxyeeleyso horumarka website-kaaga ama blog-kaaga ee miisaanka, iyo weliba taraafikada webka ee hadda, iyo jagooyinka raadinta ee wakhti dheer. Si adag u shaqeynaya si aad uga hesho liiska bogagga ee leh PR iyo awood sare, hubso in aad iska ilaaliso isticmaalka qalab gawaarida ah iyo dhisme isku xiran ama adeegyo is dhaafsi leh. Waxyaabahani waa in badankoodu ay isticmaalaan tarjumo, ilo aan dhammeystirneyn ama xitaa meelaha nadiifka ah ee lagula xariiro. Xaqiiqdii, waxay badanaaba ka shaqeeyaan waxyaabo aan caadi ahayn, sida khamaarka, sinaanta iyo farmashiyaha aan ruqsadda lahayn. Habkaasi, intooda badan adeegyadan xidhiidhinta ee khibradda badani ma qaban karaan wax ku saabsan waxsoosaarka SEO-da. Dhab ahaantii, waxay inta badan muujiyaan inay awood u leeyihiin oo kaliya inay bixiyaan shabakadaada ama blog-kaaga oo ah tiro tayo-hoose oo hooseeya oo isku-dhafan oo ka imanaya ilo khalad ah oo khalad ah, halkii ay ku siin lahaayeen qaar ka mid ah dib-u-celinta tayada sare ee liisaska liiska ee leh hey'ad aamin ah. Xirfadaha Suuqyada ama Niche-Xiriirinta
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee loo helo dib-u-kicinta awoodda sare iyo boodboodka badan oo ka mid ah taraafikada websaydhada boggagaaga ama blogka waxay dhisayaan xiriir caafimaad oo leh ilo kale oo sumcad leh oo leh hay'ad sare oo khuseeya ganacsigaaga ama suuqa ganacsiga. Habkaas, waxaad heli doontaa helitaanka tifaftirka tifaftirka, kuwaas oo laga yaabo inay yihiin kuwa ugu qiimo badan oo ka xoog badan kuwa kale ee ugu sarreeya iyo goobaha liisaska si ay u sameeyaan ujeedo ujeedo dhisme ujeedo. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale tixgeliso inaad wareysi la yeelatid saamileyaal wax ku ool ah oo ku kalsooni leh ama kuwa joornaaliga ah ee caanka ah. Dabcan, adoo siinaya inaad diyaar u tahay oo diyaar u tahay inaad bixiso wakhti ku filan iyo dadaal loogu talagalay "kasbasho" oo u qalantaa dhabarka dhabarka. Xasuusnow oo ku saabsan dib-u-xajinta macnaha - ugu dambeyntii, waxay noqon karaan kuwo ka sii qiimo badan tifaftirka - oo waxaa laga yaabaa in "lagu kasbado" iyada oo la duudduubayo waxyaabahaaga gaarka ah ee la taaban karo, sida maqaayada tayada leh ama aadka loo dalbado martida.
Goobta Dib u Dajinta iyo Meelaha Goobjoogayaasha Liiska La Siiyo
Looma baahna in la sheego in ay jiraan noocyo kala duwan oo warbaahinta bulshada ah oo ay isticmaalaan noocyo badan iyo ganacsiyo si ay u dhisaan awoodooda iyo inay dib u qabsadaan xoogaa xoog leh isla waqtigaas. Laakiin waxaan si shakhsi ahaan ah kugula talinayaa in aad sameysid joogitaankaaga internetka inta badan Google Plus, Instagram, Facebook, iyo Twitter. Sidaa samee, ha iloowin inaad tixgelisid tusmooyinka ganacsiga ee degaanka iyo liiska warshadaha si aad u buuxisid dhammaan xogtaada xiriirka si aad u hesho dib u qaabayn qiimo leh. Ugu dambeyntiina, si fiican ayaad u bilaabi lahayd adoo dhameystiraya boggaaga Google My Business, oo si fudud ula soco adigoo eegaya si aad u hesho buugaagta kale ee muhiimka ah, magacyada iyo liiska meheradaha ee la xiriira mawduucaaga mawduuca ama suuqa Source .